Vaovao - Ahoana ny fisafidianana ny milina fanapahana fitaratra?
Ahoana ny fomba hisafidianana ny milina fanapahana fitaratra?
1. Selection: arakaraka ny haben'ny fanapahana ny orinasa mihitsy, safidio izay mety kokoa aminao, ny masinina fitaratra modely2621: 50 * 50 ~ 2440 * 2000mm, maodely 3826: 50 * 50 ~ 3660 * 2440mm, modely3829: 50 * 50 ~ 3660 * 2800mm, Model4228: 50 * 50 ~ 4200 * 2800mm
Mba hijerena ny fototry ny firafitry ny ozinina, satria misy ny fitafiana ara-dalàna sy ny rovitra ary ny fampiasam-bola tsy ilaina.
2. fanapahana marina: araka ny tena mila misafidy.
3. haingam-pandeha: ny haingam-pandeha dia zava-bita lehibe ataon'ny milina fanapahana, ampahany mekanika sy fanaraha-maso ihany amin'ny fampisehoana ankapobeny sy ny fifanarahan'ny toe-javatra tsara, ny milina fanapahana mba hahatratrarana ny hafainganam-pandeha mifanaraka amin'izany, ka tsy maninona
inona ny tena hafainganam-pandeha takiana? Ny hafainganan'ny milina fanapahana dia mari-pamantarana tsara amin'ny fahombiazan'ny milina fanapahana vinavina.
4. Fitaovana fanamafisam-peo mandeha ho azy: ny haavon'ny fanamafisana ny fitaratra dia antoka lehibe amin'ny haavon'ny tahan'ny fanapahana fitaratra, ny solosaina raha tsy mety hahatratra vokatra tsara kokoa ny fanatsarana ny firaisana ara-nofo. Ny fiasan'ny fanovana faharoa aorian'ny fanamafisana dia ny hitsara zava-dehibe famantarana ny fandrosoan'ny rafitra fanatsarana.
5. ampahany mekanika: ny fahamarinan-toerana sy ny maha-azo antoka ny antoka, ny voalohany dia ny ampahany mekanika amin'ny famolavolana sy ny fametrahana ny fahaiza-mandanjalanja dia ho zava-dehibe .Mba hiantohana ny fahalemen'ny ampahany mekanika sy ny fitovizan'ny lalamby mpitari-dalana amin'ny lafiny roa , ny fomba fisorohana ny fahasimbana sy ny fiovana aorian'ny fanitsiana ny endrika dia ampahany lehibe amin'ny fizahana ny milina.
6. asa: ny asan'ny milina fanapahana dia marika famantarana manamarina ihany koa ny fahombiazan'ny milina fanapahana. Afaka manitsy ny tsindry ho azy, ny fizahana mandeha ho azy, afaka mandeha 360 ° maimaim-poana, manisy marika ho azy, na misy fetran'ny fetran'ny fitaovana sy ny sisa.
Fotoana fandefasana: Mar-17-2021